प्रगतीका लागि सकारात्मक ऊर्जा दिने यी ५ बिरुवा इन्डोर प्लाण्ट घर भित्र राख्नुहोस्
गृहपृष्ठ » जीवनशैली » प्रगतीका लागि सकारात्मक ऊर्जा दिने यी ५ बिरुवा इन्डोर प्लाण्ट घर भित्र राख्नुहोस्
जनबोली वास्तु व्यूरो । तपाई प्रगती चाहानुहुन्छ तर भनेजस्तो भएको छैन ?
त्यसो हो भने सकारात्मक ऊर्जा दिने केही इन्डोर प्लाण्ट घरमा राख्नुहोस् ।
आफ्नो आसपासमा सकारात्कमता बनाइराख्नका लागि हामी कयौं प्रयास गछौं ताकि पोजेटिभ इनर्जीको माहोल बन्न सकोस् अनि सबै नकारात्मक ऊर्जा हामीबाट टाढा जाओस्।
तर ख्याल गरेको हुँदैनौँ । यसैले नकारात्मक ऊर्जाले तपाईलाई जितिरहेको हुन्छ ।
सकारात्मक ऊर्जाका लागि केही बिरुवाले पनि साथ दिने गर्छन्। हरियालीमा मानिसको मनमा सकारात्मक ऊर्जा दिन सहायता गर्छ ।
त्यस कारण केही यस्ता बोट–बिरुवा छन्, जसले हामीलाई ऊर्जावान बन्न मद्दत गर्छन्। आज हामी ती बिरुवाको बारेमा उल्लेख गर्दैछौ ।
तुलसी : तुलसी स्वास्थ्यका हिसाबले पनि निकै गुणकारी बनस्पती हो। यो गुणकारी बिरुवा स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन सकारात्मक ऊर्जाका लागि पनि निकै फाइदायुक्त हुन्छ। यसको पात सेवनले कयौँ स्वस्थ्य समस्याहरु निको गर्छ । रोगसँग लड्ने क्षमता कायम राख्छ ।
मेहन्दी : सकारात्मक ऊर्जाका लागि शरीर तथा मन चुस्त र दुरुस्त हुन आवश्यक हुन्छ । शरीर र मनको थकानलाई टाढा गर्न लागि मेहन्दी निकै फाइदाजनक हुन्छ । यो बिरुवा घरमा राख्दा निन्द्रको समस्या समेत अन्त्य हुन्छ । निन्द्रा कम लाग्छ भने आजै मेहन्दीको बिरुवा घरमा ल्याएर रोप्नुहोस् । तपाईका धेरै समस्याहरु हटेर जानेछन् ।
मनिप्लान्ट : घरको वातावरणलाई खुसी र सकारात्मक बनाउनका लागि मनिप्लान्ट पनि निकै सहयोगी हुनेछ । यस बिरुवाले घरमा रहेको नकारात्मकतालाई बाहिर लैजान्छ। मनिप्लान्ट सप्रियो भने घरमा धनदौलत थुप्रिदै जान्छ भन्ने विश्वास रहेको छ ।
घ्यूकुमारी : शरीरको सुन्दरताका लागि एलोभेराको निकै महत्त्व छ तर के तपाईंलाई घरमा रहेको नकारात्म ऊर्जा हटाउनका लागि एलोभेरा महत्त्वपूर्ण हुने कुरा जानकारी छैन र ? छैन भने आजै घरमा ल्याएर राख्नुहोस् चमत्कार आउनेछ ।
बाँस : बेम्बो ट्रीले भाग्य तथा प्यारयुक्त अवस्था बनाइराख्नका लागि सहयाता गर्छ। यो सानो खालको बाँसलाई खासै हेरचाहको आवश्यकता पनि पर्दैन। सानो शिशाको भाँडोमा थोरै पानी रखेर एक कुनामा यसलाई राख्न सकिन्छ। यो घर भित्र राख्नकै लागि बनाएको सानो खालको हुन्छ । यसलाई प्रयोग गरेर हुर्नहोस् । बास्तबमा नै परिवर्तन हुनेछ ।
सबैका लागि आवश्यक र कामलाग्ने यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस् ।